‘Hidhaan jumlaa fi hacuuccaan siyaasaa Oromiyaa keessaa na yaaddesse’ – ABO – Ayyaantuu
HomeAfaan Oromoo‘Hidhaan jumlaa fi hacuuccaan siyaasaa Oromiyaa keessaa na yaaddesse’ – ABO
(BBC Afaan Oromoo) — Hidhaa jumlaa naannawa Finfinnee fi godinaalee Oromiyaa gara garaa keessatti raawwateen torbee tokko kana qofatti miseensonnii fi derggartonni isaa 350 ta’an hidhamuu Addi Bilisummaa Oromoo beeksise.
Dhaabichi kana kan jedhe ibsa haala yeroo irratti miidiyaaleef waajjira isaa muummeetti kenneeni.
Fulbaana bara 2018 erga gara biyyaatti deebi’ee dhiibbaan siyaasaa dhaabicharra gahaa turuu kan himan hogganni olaanaa dhaabichaa Obbo Mikaa’el Booran, “ce’umsi akka hin gufanneef obsaa turreerra” jedhan.
Hidhaa iddoowwan adda addaatti taasifamaa jiru ilaalchisuun Abbaan Alangaa Waliigalaa Federaalaa ibsa kaleessa baaseen, kanneen hidhamaa jiran namoota yakka raawwachuun shakkamanidha jedheera.
‘Furmaatni dhibdee nageenyaa Lixaa fi Kibba Oromiyaa sammuu keenyaan ala miti’
‘Human Rights Watch’ seera haasaa jibbiinsaa Itoophiyaa morme
“Wal-dhabdee saboota fi naannoolee akkasumas namoota dhuunfaa fi gareelee jidduutti uumaman ka’uumsa godhachuun iddoowwan yakki itti raawwatametti shakkamtoonni to’annaa seeraa jala oolfamanii haala qindaa’een himannaan irratti banamuun eegalameera” jedha ibsi kun.
ABO’n maal jedhe?
Dhaabichi filannoo dhufuuf qophaa’aa jiraachuu himuun ammallee dhiibbaan miseensota kiyyarra gahu dabalaa dhufeera jedhe.
“Godinoota komaandi poosti jala jiranitti ajjeechaa, hidhaa fi saamichi qabeenyaa lammiilee gidiraa hamaa keessa galcheera” jedhan.
Bakkeewwan tajaajilli bilbilaa fi intarneetii adda citetti miidhaan uummatarra gahaa jiru akka hin dhaga’amne awwaalamaa jiraachuus himaniiru.
Tibbana ammoo hidhaan jumlaa hacuuccaan siyaasaa miseensotaa fi deeggartoota isaarratti hammaachuu dhaabichi beeksiseera.
Uummanni Godina Qellem Wallaggaa haala akkamii keessa jira?
Torbee darbe qofa naannawa Finfinnee fi godinaalee Oromiyaa gara garaa keessatti miseensonnii fi derggartonni isaa 350 ta’an hidhamaniiru jedhe.
Kanneen keessaa Buraayyuu, Laga Xaafoo, Caancoo, Amboo, Calliyaa fi kanneen biroo bakka hidhaan itti hammaate jechuun eeramanidha.
Lakkoofsi namoota hidhamanii kunis kanneen torbee tokko dura hidhamanii fi dhimmisaanii mana murtiitti ilaalamaa jiran akka hin dabalannes dhaabichi himeera.
“Gaafatama guddaa kan qabu mootummaan rakkoo kanaaf furmaata kennuun, hidhaan jumlaa sababa ilaalcha siyaasaatiif taasifamu hataattamaan akka dhaabbatu gaafanna” jedhan Obbo Mikaa’el.
Komaandipostiin akka ka’u, iddoowwan tajaajilli bilbilaa citetti akka gadhiifamufis gaafataniiru.
Koomishiniin mirga namoomaa Itoophiyaas dhiittaa mirga namoomaa mul’atu irratti gaafatamasaa akka bahu dhaaman.
Haalli amma Itoophiyaa keessatti mul’atu faallaa sirna dimokiraasiti kan jedhan aanga’aan dhaabichaa, dhaabbileen mirga namoomaaf falmanis dhimmicha akka hordofuu qabaniif waamicha dhiheesseera.
Filannoo dhufu kanarratti nageenyi amansiisaan uumamee mootummaan uummataan filatame akka hundaa’uuf qooda fudhattoonni hundi gaheesaanii akka bahaniifis dhaameera.